टेक्सासको डालसमा भोलिदेखि सप्ताह ज्ञान महायज्ञ सुरु – Hindu Cultural Center
Home Event Calendar टेक्सासको डालसमा भोलिदेखि सप्ताह ज्ञान महायज्ञ सुरु
टेक्सासको डालसमा भोलिदेखि सप्ताह ज्ञान महायज्ञ सुरु
३१ मे २०१९
आइतबार कलशयात्रा गरी सोमबारदेखि टेक्ससको डालसमा महापुराणको प्रवचनको
ड्यालस (टेक्सस) – नव स्थापित पृथ्वीनारायण शाह स्मृति तथा सांस्कृतिक प्रतिष्ठानको अायोजनामा यही जुन ३ तारिखदेखि अर्भिङ्गको पशुपतिनाथ तथा बुद्ध मन्दिरमा सप्ताह महापुराण सञ्चालन हुने भएको छ ।
महापुराणको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको अायोजक संस्थाका अध्यक्ष देवीप्रसाद पाण्डे ‘दीपक‘ ले जानकारी दिए । महापुराणको अघिल्लो दिन अाइतबार बिहान ११ बजे कलश यात्रा हुनेछ । कलश यात्रामा सहभागी हुन ड्यालस फोर्टवर्थ मेट्रोप्लेक्स र वरपर बस्ने नेपाली समुदायका अायोजकहरूले अपिल गरेका छन् ।
जुन ३ देखि ९ तारिकसम्म कथावाचन हुनेछ । कथावाचन पण्डित डा. माधबप्रसाद भट्टराइ र डा. शेखर पण्डितले संयुक्त रूपमा गर्नुहुनेछ । सोही अवसरमा विदुषी कान्ता भट्टराइले समेत अाफ्नो प्रस्तुति दिनुहुने कार्यक्रम रहेको छ ।
महापुराणकै क्रममा जुन ७ तारिख सामुहिक ब्रतवन्ध कार्यक्रम समेत राखिएको छ । ब्रतवन्ध गर्न इच्छुकहरूले अविलम्ब सम्पर्क गर्न समेत अायोजक समितिले अपिल गरेको छ ।
पुराणबाट संकलन भएको दान दातव्य रकम युलेसमा बन्ने तयारीमा रहेको मन्दिरका लागि हस्तान्तरण गरिने जनाइएको छ । महापुराणमा उपस्थित भएर कथा श्रवणका साथै बन्न लागेको नयाँ मन्दिरका लागि सहयोग गर्न समेत अायोजकहरुले अाग्रह गरेका छन् ।
श्रोत : हिमालय खबर
क्यानडामा पनि श्रीमद्भागवत ज्ञानमहायज्ञ हुँदै
डिसी मेट्रो सप्ताहको कलश यात्रामा भाग लिनका लागि कलश लिन आह्वान